China Beaded Lace China Manufacturers & Suppliers & Factory
Beaded Lace - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Beaded Lace)
Ama-sequins akhazimulayo avala umugqa wethu wokubona ngokubuka nje, futhi umhlobiso wobuhlalu wenza indwangu izwakale isindayo. Uma sibheka umugqa ongaphansi kwakhe, uyindwangu enemisebe engajwayelekile. Izinga eliphakeme nokuvumelana nezimo kwenza ucezu lonke lwama-sequins luhluke. Noma ngabe yisiketi noma ibhlawuzi,...
Indwangu yeWine Beaded Lace Indian 3D Lace Indwangu
Izindwangu zeWine Beaded Lace Indian 3D Lace Indwangu zinemibalabala kakhulu, zibukeka kabi futhi zinomqondo oqinile wokwenza kanye nephethini yokulinganisa. Izindwangu ezenziwe ngendwangu yezindwangu ze-indian zibukeka kahle futhi zibukeka ngamehlo. Ngo-100% we-polyester impahla, indwangu yefolini yewayini akulula...
I-Apricot Heavy Beaded Embroidery Handwork Lace
I-Apricot heavy Beaded Embroidery Handwork Lace yethu yenziwa nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho-ke ubuhlalu bendwangu yethu eyenziwe ngophawu bunethezekile futhi buthambile. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka...
Indwangu ye-Handmade Beaded Crystal Lace engu-Purple
Indwangu yethu ye-Purple Handmade Beaded Crystal Lace yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho-ke izintambo zethu ezenziwe ngezandla ezenziwe ngobuhlalu zikanokusho futhi zintekenteke. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi,...
Indwangu ebomvu ye-Red Handwork Beaded Embroidery
Indwangu yethu ebomvu ye-Red Handwork Beaded Embroidery yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke indwangu yethu eyenziwe ngethambo lentambo inokunethezeka futhi ithe xaxa. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka...
Indwangu yethu ye-orange lace yenziwa nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho indwangu yethu yokufakelwa okusindayo esindayo iyanethezeka futhi ibuthaka. Imibala yokwehluka ingakhethwa emgqokeni wephathi, okokugqoka komshado nokufakwa kwengubo,...
Indwangu Yesibhakabhaka Yesibhakabhaka Esibushelelezi Ebusisiwe
Indwangu yethu ye-Luxury Beaded Handwork Flower Bridal Fabric yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke indwangu yethu yelanga eyenziwe ngopende iyanethezeka futhi ithambile. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi,...
I-White Floral Wedding Bridal Beaded Lace
I-White Floral Bridal Beaded Lace yethu yengubo yomshado yenziwa nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke i-Flower Beaded Lace yethu iyanethezeka futhi ibuthaka. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka komshado nokufakwa...
Ikhwalithi ephezulu Yezindwangu Ezihlanganisiwe Eziphezulu
I-Lace yethu ye-High Quality Beaded Embroidered High eyenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke i-Hard Beaded Lace yethu ebushelelezi iyanethezeka kakhulu futhi ayintekenteke. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi,...
Indwangu ye-Lory Tulle Beaded Lace
Indwangu yethu yase-Ivory Tulle Beaded Lace yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke i-Sequin Beaded Lace yethu iyanethezeka futhi ibuthaka. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka komshado nokufakwa kwengubo,...
Indwangu Emnyama Yombala Okhanyayo Okhanyayo Ohlaza Okotshani
Indwangu yeLace Beather Embroidery Lace
Intambo yethu yethwele yegolide yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho-ke umucu wethu wamaphethelo wegolide unokunethezeka futhi obucayi. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka komshado nokufakwa kwengubo, njll....
Indwangu Yezimbali Emnyama Ehlotshiswe Ngombala
Indwangu yethu yezimbali emnyama eyenziwe ngopende yenziwa nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke indwangu yethu yeparele emnyama iyanethezeka futhi ibucayi. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka komshado nokufakwa...